मोदीसँग अब नेपालमाथि नाकाबन्दी गर्ने हिम्मत छैन ? आयो सनसनीपूर्ण खुलासा (भिडियोसहित) — newsparda.com
मोदीसँग अब नेपालमाथि नाकाबन्दी गर्ने हिम्मत छैन ? आयो सनसनीपूर्ण खुलासा (भिडियोसहित)
मोदीसँग अब नेपालमाथि नाकाबन्दी गर्ने हिम्मत छैन ? आयो सनसनीपूर्ण खुलासा (भिडियोसहित) काठमाडौं । सन् २०१४ को निर्वाचनपछि भारतीय राजनितिमा बलिाये खम्बाको रुपमा उदय भएको थियो प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको । उनै नरेन्द्र मोदीलाई फेरी एक पटक भारतको नेतृत्व गर्न त्यहाँका मतदाताले मत दिएका छन् । जानकारहरुका अनुसार उनि थप शक्तिसाली भएका छन् । उनले नयाँ इतिहास रचेको भारतीय सञ्चार माध्यमले बताएका छन् ।
विपक्षी भारतीय कांग्रेसलाई पराजीत गर्दै मोदीले आफ्नो दोस्रो कार्यकालको लागि मार्ग प्रसस्त गरेका हुन् । भारतमा ५ सय ४३ मध्ये ५ सय ४२ सिटमा चुनाव भएको थियो । शुक्रकार दिउँसोसम्म सबै निर्वाचन क्षेत्रको मतपरिणाम आइसकेको भारतीय निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको छ । निर्वाचनमा मोदीको पार्टी भारतीय जनता पार्टी एक्लैले ३ सय ३ निर्वाचन क्षेत्रमा जीत हात पारेको हो ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार बीजेपी नेतृत्वको राष्ट्रिय गणतान्त्रिक गठबन्धन (एनडीए) ले ३ सय ५० सिटमा जित हात पारेको छ । लोकसभा चुनाव २०१९ मा भारतीय जनता पार्टी(बीजेपी) ले सन् २०१४ मा भन्दा पनि धेरै सिट जितेको छ । अब मोदीले फेरी पनि भारतको नेतृत्व गरीरहँदा नेपालमा त्यसको प्रभाव कस्तो पर्ला ? हामीले परराष्ट्रविद् राजेश्वल आचार्यसँग कुराकानी गरेका छौ । उहाँसँग गरिएको पूरा भिडियो हेर्नुहोस् ।